Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat:ြုမန်မာ့အရုဏ်သစ်၏ မြစ်သား ခရီးစဉ် မှတ်တမ်း (၁)
ြုမန်မာ့အရုဏ်သစ်၏ မြစ်သား ခရီးစဉ် မှတ်တမ်း (၁)
2013 ဒီဇင်ဘာ 27~30
မြစ်သားမှ ပေတော ပရဟိတကျောင်းသို့ ငွေပဒေသာပင်အလှူ၊ နေ့ဆွမ်းအာဟာရ၊ စာရေးကိရိယာနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ စုစုပေါင်း ကိုးသိန်းဖိုးခန့် လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။။
မန်ဘာအားလုံးအား ကိုသိ်ုလ်အမျှပေးပါသည် ...[Thwe Naing]
မြစ်သားမြို့ မန္တလေးတိုင်းရှိ ပေတော ပရဟိတကျောင်း ( စောလူးမင်းကျောက်စာတွေ့ရှိသည့် ကျောင်း ... ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာထက် စောသည် ) သို့ မြန်မာ့ အရုဏ်သစ်မှ လှူသည့် တစ်ရက်စာအာဟာရ ကျပ်တစ်သိန်းကို ပေးအပ်စဉ်။
မြစ်သားတွင်ရှိနေစဉ် လိုင်းမကောင်းသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ မြစ်သားမှ ယခုအချိန်လေးမှ မန္တလေးသို့ ပြန်ရောက်သောကြောင့်လည်းကောင်း တင်ပေးရန်ရှိသည်များ နောက်ကျနေသည်ကို နားလည်ပေးပါရန် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ [GLZ]
Goodluck Zaw၏ အစ်ကို ကိုစိန်လင်း စံအိမ်သူစတိုး မြစ်သားမှ ပေတောကျောင်းရှိ ကလေးများအတွက် တစ်ရက်စာအာဟာရအလှူငွေ ကျပ်တစ်သိန်းကို 27.12.13 ညတွင် Goodluck Zaw နှင့်အတူ သွား၍ ပေးအပ်စဉ် ..[GLZ]
ပရဟိတ ကျောင်းတွေမှာ တစ်နေ့စာ အာဟာရ လှုတိုင်း မစားခင် အလှုရှင်တွေကို မေတ္တာပို့ ကန်တော့ တာမျိုး မြင်ရရင် စိတ်မကောင်းဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် သာမာန် အမှုမဲ့ ပဲ ကျွေးစေချင်ပေမယ့် ကိုယ်က ဝင်ပြီး စွက်ဖက်လို့လဲ မကောင်းဘူး။ သူတို့ စိတ်သိမ်ငယ်တာမျိုး မမြင်ရက် မမြင်ချင်ပါ.
။ ဝေဖန်တာ မဟုတ်ပါ။ စိတ်မကောင်းတာကို ရင်ဖွင့်ယုံပါ။ သူတို့စိတ်ထဲတော့ ဘာသိဘာသာ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာမိတဲ့အခါတိုင်း စိတ်ချမ်းစာစရာ မ၇ှိပါ။ အော် --- ဘဝကံ ခေကြသူလေးတွေရယ်။ ဘယ်တော့မှ အားမာန်မလျှော့လိုက်ကြပါနဲ့။ [KSN]
ဒါကတော့ ကိုယ့်ဖက်က ဖြစ်တဲ့ စိတ်တစ်ခုပေါ့။ သို့သော် ကလေးတွေဆိုတာ ဘေးကနေ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပဲ့ပြင်ပေးတဲ့သဘော အထိန်းသဘော ကျေးဇူးတရားကို သိတတ်စေသင့်တဲ့သဘော စတာလေးတွေကို ထည့်ပေးထားရတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ဟာကွာ လူဆိုတာ သူ့ဗီဇနဲ့ သူလာတာကွ ... လို့ ဆိုမလား။ ဒါလည်း မှန်သင့်သလောက်မှန်တယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် တံငါနားနီးတံငါ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး .... အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ သစ်ငုတ်ကို ခြင်္သေ့ရုပ်ထုလည်း ရတယ်။ မြေခွေးရုပ်ထုလည်း ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောလေးတွေကို နားလည်မိတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ကိုယ်ချင်းစာလို့ စိတ်ထဲရှိတာကို ကိုစိုးနိုင်က ချရေးတာပေါ့။
ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ သူတို့က အလှူရှင်တွေကို အဲလိုရှိခိုးတာကိုတော့ ပိတိမဖြစ်ပေမယ့် ရှိခိုးဖို့ မေတ္တာပို့ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲလို့မေးရင် သူတို့အတွက် သူတို့က အလှူရှင်တွေကို ရှိခိုး မေတ္တာပို့သင့်တယ်။ [GLZ]
အဲ... ပြောရဦးမယ် လိုက်မည့်သူတွေအတွက် ခရီးစရိတ် စားစရိတ်က "ထုံးစံအတိုင်း" အမေဒိကန် စစ်စတန်ပါခင်ဗျာ။ အသင်းငွေ လုံးဝ မသုံးပါဘူး။ (အားတော့နာပါတယ် ခင်ဗျာ နားလည်မှု မလွဲအောင် ကြိုပြောထားရတယ်။ EC တွေကတော့ သိပြီးသားပါ )
အဲ -- ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား ဂျီးဒေါ်နွားအလကားကျောင်းပေးတယ် ဆိုသလို ကျွန်တော်တို့အသင်းကို လှုထားတဲ့ အလှုငွေကို တစ်ပြားမှ မထိပဲ မသုံးပဲ ကိုယ့်အိပ်စိုက်အလှုတွေအကောင်ထည်ဖော်ခဲ့တာ ခုဆိုရင် နှစ်နှစ်တောင် ရှိပေါ့။ အမှုဆောင်တွေကို အားလည်းနာတယ် ခင်လည်းခင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အလှုရှင်တွေအနေနဲ့လည်း ဒီလို ခရီးဝေးသွားပြီးလှုတဲ့အခါ အသင်းငွေတွေနဲ့ ပျော်ပွဲစားထွက်သလို ထင်မှာလည်း တကယ်စိုးမိသဗျ။ ကျွန်တော်တို့က ခရီးသွားရင်း ပျော်ပျော်ပါးပါး ဒါ့ပုံတွေလည်းရိုက်တင်ကြမှာပဲ။ အဲဒီ သွားစားရိတ် လာစားရိတ် စားစားရိတ်အားလုံး အသင်းငွေမပါဘဲကိုယ့်ပိုက်ပိုက်နဲ့ကိုယ်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်ခညား။ သို့သော်လည်း အညာသားတွေဟာဖြင့် ဧည့်ဝတ်ကျေပါတယ်ခင်ဗျ။ စားစားရိတ်တော့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ [KSN]
ကျွန်တော် စဉ်းစားထားတဲ့ အချက်မူကြမ်းက 28 မနက် ကျွန်တော့်အိမ်မှာ မနက်စာစား။ ပေတောပရဟိတကို သွားလှူ။ နေ့ခင်း ကျွန်တော့်အိမ် နေ့ခင်းစာစား။
အထုပ်အပိုးပြင်ပြီး ပြက္ခရွေတောင်တက်မယ်။ တက်ဖြစ်ရင် ညနေခင်းအမှီတက်မှ ရပါမယ်။ စောင်ခေါင်းအုံး မပူပါနဲ့။ ညစာ ထမင်းချိုင့်နဲ့ ထုပ်ခဲ့ပါမယ်။ တောင်ပေါ်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မနက်ခင်း ပြန်ဆင်းလာမယ်။ မဆင်းခင် ယူလာတဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်တွေ စားမယ်။ နေ့ခင်း 11 လောက် အိမ်မှာစားမယ်။
စားပြီးတာနဲ့ ညောင်ဝန်းရွာ၊ ရွှေမင်းဝံတောင်ကို တက်မယ်။ ညပိုင်း ကိုစိုးနိုင်အိမ်မှာ စား။ အမြန်လမ်းကနေ ကားစောင့်စီးမယ်။ အဖွဲ့သားအားလုံးအတွက် ကား ၂ စီး စီစဉ်ထားပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အေးမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အနွေးထည်ယူဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ တောင်တက်ဖြစ်ရင် အလွန်ချမ်းပါလိမ့်မည်။ [GLZ]
စာရင်း‌လေးပါ။ သွားတိုက်‌‌ဆေးကို‌တော့ 3Dပဲသုံးလိုက်‌မလားလို့။ အခုပစ္စည်း‌တွေ ‌ဈေးများမယ်‌‌တော့မထင်‌ဘူး။
မနက်‌ဖြန်‌သဘက်‌ခါဝယ်‌ပါမယ်‌။ ‌ပြော‌ပေးကြပါဦး။ [GLZ]
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မြန်မာ့အ၇ုစ်သစ် ပရဟိတ လူမှုကူညီရေးအသင်း ဒီဇင်ဘာမှာ လှုဘို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ မြစ်သားမြို့ ပေတော ပရဟိတ ကျောင်းမှာ ရှေးကျောက်စာချပ် တူးဖော်တွေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းမှာ သူငယ်တန်းကနေ တက္ကသိုလ်ထိ ကျောင်းသား 109 ယောက်၇ှိပါတယ်။ အသင်းနဲ့အတူ ကျောင်းစာအုပ်များ ခဲတံ ဘောပင် အစရှိသဖြင့် လှုဒါန်းလိုပါက ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ မြစ်သား သွားလှုမယ့်နေ့ကတော့ ဒီဇင်ဘာ 28 ရက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ [KSN]
ပြက္ခ‌ရွေက အ‌ရှေ့‌တောင်‌ အ‌နောက်‌‌တောင်‌ရှိသည်‌။ အ‌နောက်‌‌တောင်‌မှာ ‌ကျောက်‌တိုင်‌ရှိ။
မိန်းက‌လေးများ အထူးဇွဲရှိရပါမည်‌။ ခြင်‌‌ထောင်‌‌ခေါင်းအုံး ‌စောင်‌ စားစရာများ ‌‌ရဗေူးများ ကိုယ်‌စီသယ်‌ရပါမည်‌။ ထိုအရာများ ကျွန်‌‌တော်‌တာဝန်‌ယူမည်‌။
ဓာတ်‌မီးယူရမည်‌။ ဘွတ်‌ဖိနပ်‌ ‌ဘောင်းဘီရှည်‌ အ‌နွေးထည်‌ထူထူ ‌ခြေအိတ်‌ လက်‌အိတ်‌ ပါရမည်‌။ သရဲမ‌ကြောက်‌သူဖြစ်‌ရမည်‌ ဟိဟိ [GLZ]
မနက်ဖန် ၂၀ ရက်နေ့ မြစ်သား သို့ သွားရန် မန္တလေး ကားလက်မှတ် ဖြတ်ပါမည်။
အပြောင်းလည်းရှိရင် မြန်မြန် ဖုန်းဆက်တော်မူကြပါ။
၂၇ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီနောက်ပိုင်း ကား။ (ရန်ကုန်အထွက်)
၂၉ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီခန့် (မန္တလေး အထွက်) အသွား/အပြန် ဖြတ်ပါမည်။ လူ လက်ရှိကွန်ဖန်း ၉ ယောက် ကွန်ဖန်း ဝိတ်တင်း ၂ ယောက်ပါ။ ဖြတ်ကာနီး အဆိုပါ ၂ ယောက်ကို မေးပါမည်။ ကျန်သူများ မမေးတော့ပါ။ မောင်ဂျက်ဂါ မန်းကနေ ဆင်းလာမည်တဲ့။
ပရဟိတ နှင့် မြန်မာ့အရုဏ်သစ် တောင်တတ်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ( :D)
ပြက္ခရွေတောင်က ၄ နာရီလောက် တတ်ရတယ်တဲ့--း) [KSN]
လမ်းမှာ ဘုတ်‌‌တေး ၈ကြိမ်မှ ‌၁၀ကြိမ်‌ခန့်‌ဖြစ်‌လိမ့်‌မည်‌။ မတက်‌နိုင်‌သူများ အန်‌နာဗွန်‌စီကြို‌သောက်‌ထားရန်‌။ ‌နေ့လည်‌တက်‌ ည‌နေ‌ရောက်‌ ‌တောင်‌ထိပ်‌ညအိပ်‌။
‌စောင်‌‌ ‌ခေါင်းအုံး ခြင်‌‌ထောင်‌ စားစရာ ‌ရေဗူး တို့ကို အသီးသီးမျှသယ်‌ရမည်‌။ ‌ခြေအိတ်‌လက်‌အိတ်‌ ‌ဘောင်းဘီရှည်‌ထူထူ အ‌နွေးထည်‌ထူထူ ‌ခေါင်းစွပ်‌ ပါလျှင်‌‌ကောင်းသည်‌။ ချမ်းတာက ယပင့်‌နှင့်‌‌ရော ယရစ်‌နဲ့ပါ ခြမ်းလိမ့်‌မည်‌။
ညစာယူလာမယ့်‌ ထမင်းဆီဆမ်း အ‌ခြောက်‌အခြမ်းစား ကြာဇံရယ်‌ဒီမိတ်‌အထုပ်‌ဟင်းရည်‌လုပ်‌‌သောက်‌မည်‌။
ညမီးပုံပွဲလုပ်‌ပြီး အသင်းအတွက်‌ လိုအပ်‌သည်‌ထင်‌တာများ‌ဆွေး‌နွေးကြမည်‌။
ထို့‌နောက် မီးပုံပွဲမှာ စကားလက်‌ဆုံ‌ပြောကြမည်‌။ အိပ်‌ကြမည်‌။ လင်‌မယားတူတူမအိပ်‌ရ။ မနက်‌ခင်းမှာ အရုဏ်‌တက်‌ မှတ်‌တိုင်‌မှာ အရုဏ်‌သစ်‌နှင့်‌အတူ အရုဏ်‌သစ်‌တို့ ပြက္ခ‌ရွေ‌တောင်‌ထိပ်‌ရှိ မြန်‌မာပြည်‌ အလယ်‌ဗဟိုမှတ်‌တိုင်‌မှာ ဓာတ်‌ပုံရိုက်‌မည်‌။
မနက်‌စာကြာဇံရယ်‌ဒီမိတ်‌‌သောက်‌မည်‌။ ပြန်‌ဆင်းမည်‌။ ‌တောင်‌‌အောက်‌တွင်‌ ဗိုက်‌ဆာပါက ‌ပြောရန်‌။ ကိုစိန်‌လင်းမှ လာကြိုမည်‌။ ‌နေ့ခင်းစာ အိမ်‌မှာစား ကိုစိုးနိုင်‌တို့ဆီသွား။
မင်းဝံ‌တောင်‌တက်‌မည်‌။ ‌လှေကားရှိသည်‌။ [GLZ]
28.12.13 နေ့တွင် မြန်မာ့အရုဏ်သစ် ပရဟိတအဖွဲ့သားများမှ မြစ်သားမြို့ မန္တလေးတိုင်းအတွင်းရှိ ပေတောပရဟိတ လူငယ်ဖွံဖြိုးရေးကျောင်းသို့ ကျပ်ရှစ်သိန်းကျော် ကိုးသိန်းဖိုးခန့်ရှိ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ+ပေတောပဒေသာပင်+န၀ကမ္မ စသည်တို့ကို ပေးလှူပြီးနောက် နေ့လည်ခင်း2နာရီခန့်တွင် မြန်မာပြည်အလယ်ဗဟိုဟုဆိုသည့် မှတ်တိုင်ရှိသည့် မြစ်သားမြို့နယ် ပြက္ခရွေတောင်တော်(အနောက်ဖက်တောင်) ပေါ်တွင် ကပ္ပိယမရှိ တစ်ပါးတည်း သီတင်းသုံးတော်မူသည့် ဆရာတော်ထံသို့ ၀တ္တုငွေ ကျပ်တစ်သိန်းကို လှူတန်းရန် အားကြိုးမာန်တက်ဖြင့် တက်ခဲ့ကြပါသည်။
ပြက္ခရွေတောင်သည် အလွန်ပင်မက်စောက်သည်။ လှေကား စောင်းတန်း စသည်တို့မှာ တောင်ခြေနားနီးသည့် မောနားတောင် အလယ်လောက်အထိ(ဆိုင်ကယ်တက်လို့ရသည့်နေရာအထိ) သာရှိသည်။ မိုင်အားဖြင့် ကျွန်တော်များ အတိအကျ မမှန်းနိုင်သော်လည်း ထိုနားရှိနေထိုင်သူများကို တောင်ခြေတွင် မေးမြန်းသောအခါ အနောက်ဖက်တောင်ထိပ်ဆိုလျှင် နှစ်မိုင်နှင့် လေးဖာလုံခန့်၊ မောနားတောင်ဆိုလျှင်
လေးဖာလုံဟု ပြောကြပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားများ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် မတက်ပဲ ခြေလျင်တက်ခဲ့ကြပါသည်။
မောနားတောင်သို့ရောက်သောအခါ စောင်းတန်းများ မရှိတော့ပေ။ လှေကားသည်လည်း အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီ။ ထိုမှခဏနား၍ တောင်ခြေမှာကတည်းက ယူလာကြသော ရေဗူးများထဲမှ ရေကို သောက်သည်။ မောနားတောင်သို့ စောင်းတန်းဖြင့် တက်ခဲ့ကြသည်မှန်သော်လည်း လှေကားများမှာ အထူအပါး အနိမ့်အမြင့် မတူညီကြသောကြောင့် ထို လေးဖာလုံတက်သော ခရီးတွင်ပင် လှေကားဖြင့် ခလုတ်တိုက်ပြီး လဲကျသူများရှိသည်။ မူလ စတက်ကတည်းက ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်သယ် ကိုယ့်ရေဗူးကိုယ် ယူပြီး တက်ခဲ့ကြသည်မို့ ( Goodluck Zawနှင့် November Rainမှ လွဲ၍ ) တောင်တက်သည့်အလေ့အကျင့်လည်း မရှိရကား ထိုလေးဖာလုံခန့် တက်ပြီးနောက် လိုက်ပို့သည့် ကား ပြန်သွားပြီလားလို့ မေးတဲ့သူရှိသည် Who ? May I ask >>ကို Soe Naing. Please answer me. I forget it. ( Just Joking )
မောနားတောင်တွင် ၃ကြိမ်မြောက် ခဏနားပြီး စကားပြောဆိုကြသော မူဗီဖိုင်လေးကို လိုင်းကောင်းလျှင် ကျွန်တော်မှ မုချ တင်ပေးပါအံ့။ ထိုမောနားတောင်မှ စ၍ ကို Soe Naing မှ တစ်လမ်းလုံး ပြောလာသည့် မှတ်သားဖွယ်စကားလေးများကို မူဗီဖိုင်တွင် ကြည့်တော်မူ နားဆင်တော်မူကြပါရန် .. အမြည်းအားဖြင့် " ဟိုကောင်လေ ပြဿနာကောင် ... အဲကောင် အဲကောင် .... ပြောတော့ ပြေပြေလေးတဲ့ ... အသာလေး လမ်းလျှောက်သွားရတာတဲ့ ... ဟော ဟဲ ဟော ဟဲ "
ယခုတက်သည့် မြန်မာ့အရုဏ်သစ် ပရဟိတအဖွဲ့ထဲမှ ထိုတောင်ပေါ်သို့ ရောက်ဖူးသူသည် အားလုံးပေါင်းမှ တစ်ယောက်တည်းသာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည်လည်း မြစ်သားသားဆိုပေသည့် ပြက္ခရွေတောင်ကို ယခုအခေါက်မှ တက်ဖူးသူဖြစ်ပါသည်။ ရောက်ဖူးသည့် ထိုသူသည်ကား ကို Soe Naing ၏ ငယ်သူငယ်ချင်းကြီး ကို ၀င်းမိုးသန့်ဖြစ်လေသည်။
" ဒါနဲ့ ကိုဝင်းမိုးသန့်ရယ်၊ ခင်ဗျား ဘယ်တုန်းက ရောက်ဖူးတာလဲဗျ " " ငါ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လောက်ကပေါ့ အဲဒီတုန်းကတော့ ပြေပြေလေးထင်တာပေါ့ ငါ လူပျိုပေါက်အရွယ်တုန်းက " ...... တိန် ...... ကို Soe Naing မှ " မင်းကွာ တော်တော်ရက်စက်တဲ့အကောင် "
ကျောက်ဆောင် ကျောက်တုံးများသည် မညီမညာတိုးထွက်လျက် တည်ရှိနေသည်။ သစ်ပင်များသည်လည်း အစီအရီပေါက်လျက်ရှိနေသော်လည်း တောင်တက်လမ်းခရီးမှာ မတ်စောက်လွန်းသောကြောင့် လမ်းဘေးတွင် တွေ့ရသော ၀ါးပင်များမှ ၀ါးလုံးများကို တောင်ဝှေးအဖြစ်အသုံးပြုရလေသည်။
လူတစ်ယောက်ပင် အတော်ခက်ခက်ခဲခဲ လေးဖက်ကုန်းတက်သည့်နေရာများစွာကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဟိုးရှေးရှေးကလူများ၊ တောသတ္တ၀ါများ သွားခဲ့ကြ၍ ကျောက်တုံးများမှ ပဲ့ထွက်လာသော မန်ကျည်းစေ့အရွယ် ဂေါ်လီလုံးအရွယ် ကျောက်လုံးလုံးကလေးများသည် ကျွန်တော်တို့၏ ခြေထောက်တို့ကို များစွာ ချော်လဲစေပါသည်။
မောနားတောင်မှစ၍ လမ်းတွင် အင်္ဂတေဖြင့် ပြုပြင်မွန်းမံထားခြင်းမရှိဖူးသေးပဲ သဘာဝအတိုင်းရှိနေသော တောင်ရိုင်းကြီး ပြက္ခရွေပင် ဖြစ်ပါသည်။ အချို့နေရာများတွင် ကျောက်တုံးများကို ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက် စီနိုင်သလောက် စီပေးထားသည်။ အချို့နေရာများတွင် သစ်ငုတ်များ သစ်မြစ်များကို မြေတွင် မြှုပ်ထားသည်ကိုလည်း အနည်းအကျဉ်းတွေ့ရလေသည်။ သို့သော် ထိုနေရာများမှာ လွန်စွာမှ နည်းလှပါသည်။ အများအားဖြင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး၍ ချော်မလဲအောင် ပြုတ်မကျအောင် ခက်ခက်ခဲခဲ နဖူးမှ ချွေး ခြေမကြားသို့ကျအောင် အားသွန်ခွန်စိုက်ဖြင့် တက်ခဲ့ကြသည်။
လမ်းတွင် တောင်ပေါ်မှ ပြန်ဆင်းလာကြသောသူများကို တောင်ဝှေးတစ်တောင်တောင်ဖြင့် တွေ့ရသည်။ ထိုသူများကို ကျွန်တော်တို့မှ " ရောက်ခါနီးပြီလားဗျိုး " ထိုသူများ ပြုံးစစဖြစ်သွားကြသည်။ ပြန်ဖြေသည်ကတော့ " ရောက်တော့မှာ နည်းနည်းလေး သွားလိုက်ရင် ရောက်ပါပြီ သိပ်မလိုတော့ဘူး " ဟူ၍ပင် ...
တကယ်တမ်း ဆက်တက်ကြည့်သောအခါမှ သိလိုက်ရသည်က ထိုမေးမိသော နေရာသည် တောင်တက်ခရီး၏ တစ်ဝက်ပင်မရှိသေးချေ။ တဖန် နောက်ထပ်တွေ့သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ကျွန်တော်မှ " ဗျိုး ဦးလေး ဟိုနားလေးက နည်းနည်းပဲ လိုတော့တာမလား " " အဲ အဲ ဟုတ်တယ် အဲလမ်းအတိုင်းပဲ ရှေ့ဆက်သွားရင်ရောက်တယ် "
အမှန်တော့ ကျွန်တော့်မေးခွန်းတွင် ဖြေသူမှ ဖြေရန် အဖြေမရှိပါ။ ထိုစဉ် ...
" အေး ... ၀င်းမိုးသန့် မင်းတော့ ငါ တွေ့မယ် .... အတော်ရက်စက်တဲ့အကောင် ၊ မင်းဘ၀တော့ ငါ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင် ငါ့အကြောင်းသိစေရမယ် အင်တာနက်မှာကို တင်ပစ်မယ်ကွ " ကျွန်တော်တို့မှာ မောရသည့်ကြားထဲမှ ရယ်ရပြန်သေးသည်။ အမှန်မှာတော့ ကို Soe Naing သည် တောင်တက်နေစဉ်အတွင်းတွင် တကယ်မကျေမနပ်ဖြစ်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ သွားလာရင်း မပျင်းရအောင် အရွှန်းဖောက် ရန်စနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထိုသို့ ကျွန်တော်ထင်မိပါသည်။
လမ်းခရီးတွင် တဘုန်းဘုန်း ပစ်လဲနေသူလည်း ရှိသည် မ Min Min Soe ။ လဲသော်လည်း အားမလျှော့ ပြန်ထပြီး ဆက်တက်သည်။ ကျွန်တော်တို့ တောင်တက်အဖွဲ့တွင် ဇွဲဆုချီးမြင့်ရမည့်သူသုံးယောက်ရှိသည်ဟု ထင်ပါသည်။ ၁ မ Min Min Soe ။ ၂ အသက် ၁၂ နှစ်သာရှိသေးသည့် မောင်ကောင်းစည်သူ ။ ၃ မ Thain Gi တို့ဖြစ်သည်။ ကို Soe Naing နှင့် မှင်စာတို့မှာ တကယ့်ပါရမီဖြည့်ဖက်ကောင်းများ ဖြစ်ကြလေသည်။ ကို Soe Naing မှာ မ Min Min Soe ကို အားပေးကူညီသည်။ မှင်စာမှ မ Thain Gi ကို တွန်းတင် (အဲလေ) တွဲခေါ်သည်။ စံပြ ဇနီးမောင်နှံအဖြစ် ကျွန်တော်မှ အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
ရေးရန်ကျန်သည့်အပိုင်းများကို ဆက်လက် ရေးသားပေးပါမည်။ [GLZ]
ပြက္ခရွေတောင်နှင့် ပတ်သက်၍ November Rain မှ အသိတစ်ယောက်အား ဖုန်းဖြင့် မေးမြန်းထားခြင်း ။ [GLZ]
အမှန်တော့ ပလီပလာစကား။ ။
စိတ်တင်းကာ ဇွတ်နင်းကန် တတ်ရတယ်
ပြက္ခရွေ တောင်စခန်း။ ။ [KSN]
2013-12-29 ပြက္ခရွေ တောင်တက်မှတ်တမ်း
ပြက္ခရွေ အနောက်တောင် တောင်တက် မှတ်တမ်း
၂၀၁၃ခု ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်
ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင် အထက် ပေပေါင်း ၃၄၆၇ပေ
၂၈ ရက် နေ့လည် ၁ နာရီခွဲမှ စတက်ပြီး တောင်ပေါ်သို့ ညနေ ၆နာရီခွဲ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ပြက္ခရွေ့စွယ်တော်ရှင် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးဩဘာသ၏ ကျောင်း ဓမ္မာရုံတွင် တည်းခိုခဲ့ကြသည်။ ၂၉ နံနက် ၈နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် တောင်ပေါ်မှ ပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြပါသည်။
တောင်တက် အဖွဲ့သားများမှာ မြန်မာ့ အရုဏ်သစ်မှ ၁၄ ဦး ဖြစ်ပါသည်။
ပရဟိတ လူမှုကူညီရေး အသင်း၏ မြစ်သားမြို့ ပေတော မိဘမဲ့ ကလေး ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ကျောင်းသို့ အလှူပြုသူရန်သွားကြသူများအနက်မှ အောက်ပါ ၁၄ ဦး တောင်ပေါ်ကို တက်ရောက်ခဲ့ကြလေသည်။
တကယ့်ကို Fruitful အလှူခရီးစဉ်ကလေးပါပဲ။ စီစဉ်ပေးတဲ့သူများ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပေတောကျောင်းကို လှူရတယ်။ စောလူမင်းကျောက်စာတူးဖော်ရာ Site နဲ့ ကျောက်စာမူရင်းကို မြင်ခဲ့ရတယ်။ ရွှေမုဌောဘုရားကို ဖူးခဲ့ရတယ်။ အနော်ရထာမင်းကြီးတည်ထားခဲ့သည်ဟူသော စွယ်တော်ရှင် ပြက္ခရွေ စေတီ ကိုလည်း အမြင့်ပေ ၃၅၀၀ နီးပါရှိသည့် ပြက္ခရွေအနောက်တောင် ကို ၂မိုင် ၄ဖာလုံ ကုပ်ကက်တက်၍ ဖူးမြော်ခွင့် ရခဲ့သည်။ ကိုစိုးနိုင်တို့ မွေးဌာနီ ညောင်ဝန်းရွာဆီသို့ အလည်ရောက်ခဲ့ရသည်။ မုန့်တွေ မျိုးစုံစားခဲ့ရတယ်။ ခရီးသွားအတွေ့ကြုံတစ်ခု
ဤခရီးစဉ် ဖြစ်မြောက်အောင်စီစဉ်ပေးသော၊ တောင်ပေါ်တည်းရန် နေရာထိုင်ခင်း၊စောင်ခေါင်းအုံးကအစ စီစဉ်ပေးသော ကိုဇော်မင်း+မနုမာ ဇနီးမောင်နှံ
တည်းခိုနေထိုင်အစားအသောက်များနှင့် လိုလေသေးမရှိဧည့်ခံသော၊ မညည်းမငြူ လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးသော ကိုစိန်လင်း စံအိမ်သူစတိုးဆိုင် မိသားစု https://plus.google.com/111877863957003984086/about?hl=en
တောင်ပေါ်တက်ဖြစ်ရန် သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းပေးသော တိုးဂိုက်ကြီး ကိုဝင်းမင်းသန်း
မလိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်အောင် အဆွယ်ကောင်းသော ကိုစိုးနိုင်တို့မိသားစု
လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ တပွေ့တပိုက်ထည့်ပေးလိုက်သော၊ အပင်ပန်းခံ ရေဗူးတွေ ကူသယ်ပေးသော ကိုမင်းသက်စံတို့ ဇနီးမောင်နှံ
ခရီးတောက်လျောက် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ပေးသော ကိုနောင်နောင်
လမ်းတလျောက် အမောပြေ ချိုချဉ်၊ သစ်သီး၊ ရေ၊ ဇီးတော်ဖီ၊ အန်နာဗွန်စီ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ထုတ်ကျွေးကြသည့် ကိုအေးမင်းဦင်္း+မသိင်္ဂီ၊ မမင်းမင်းစိုး၊ သွယ်သွယ်၊ ဟေမာနှင်း၊ နောင်နောင် အပါအဝင် မြန်မာ့အရုဏ်သစ်ဝိုင်းတော်သားများအား ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်စကားဆိုရပါသည်။ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဆုံကြပါစို့ ဟု....။ [KLZ]
Posted by Ko Gyii at 11:14 AM
ပြက္ခရွေ စွယ်တော်ရှင် စေတီတော်